Nabadgelyo Mandriva, Hello Fedora 22 | Laga soo bilaabo Linux
Nabadgelyo Mandriva, Hello Fedora 22
diazepam | | Qaybinta
Shalay waxaan ogaanay in shirkadda Mandriva, way xidhnayd. Waxaan ku aqriyay twitter faallooyin murugo badan oo ku saabsan arintaan waxaanan ogaaday in dad yar ay umuuqdeen inay ogaadeen in xaqiiqda Mandriva, shirkadu, aysan sii sameynin qeybinta Linux dhowr sano. Qeybinta Mandriva Linux waa hadda OpenMandriva (oo ugu dambeyn loo been abuuray PCLinuxOS iyo Mageia).
Iyo sida qof uu ku soo qoray "FOSS waa FOSS." Waa run! Taasi waa awoodda software bilaash ah oo furan oo mashruucyada nooleeya, waana sababta aan ugu maleynayo abuuritaanka Mandrake Linux 17 sano ka hor inaysan ahayn waqti lumis dhammaystiran 🙂
Oo hadda, yeynaan murugoon, waa inaan diirada saarnaa waxyaabaha maanta laga hadlayo ee IT: asturnaanta iyo keli ahaanshaha Google. Iyo waxyaabo badan oo xiiso leh!
Erayada Gaël Duval, aasaasaha Mandrake. Mandriva waa la shubay kadib sanado badan oo uu la dagaallamayay musalifnimo iyada oo bulshada inteeda badanna ay u guureen Mageia (ama Rosa Linux).
Iyo dhanka kale Fedora 22 waa la siidaayay. Markan waxay la timid kernel 4.0.4, GNOME 3.16, KDE Plasma 5.3, GCC 5.1 iyo digaagadda keega: ugu horrayntii maareeyaha baakadda DNF oo beddelaya YUM. Maamulaha xirmadaan waxaa loo sameeyay sidii dib loogu qori lahaa YUM iyada oo sifiican loo xoojin karo xawaaraha, isticmaalka xusuusta iyo xalinta ku tiirsanaanta (mahadnaqida maktabadaha Hawkey iyo libsolv), marka lagu daro taageerida Python 3 iyo lahaanshaha API ka wanaagsan oo dukumenti ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Qaybinta » Nabadgelyo Mandriva, Hello Fedora 22
cunchbang sidoo kale macasalaameeyay
4 bilood ka hor ayaa xilka laga qaaday
Haa, laakiin sababo gebi ahaanba ka duwan awgood, soo-saaraha keliya iyo dayactirka, si sax ah u go'aansaday, ama aan ahayn, in jiritaankeedu aan loo baahnayn. Wali waxay ku nooshahay fargeetkeeda si kastaba ha noqotee.
Jawaab Elmer Foo
Lafteeda lafteeda, horumariyaha wuxuu cadeeyay in jiritaankeedu uusan mar dambe loo baahnayn, maadaama baahida loo qabo dadka isticmaala ee haysta kombiyuutarada leh wax yar ama ku dhowaad eber ay si aad ah hoos ugu dhacday, dhammaantoodna waxaa ugu mahadcelinaya qiimaha jaban ee All-in-one (Rasperry Pi, Ardruino) waxay kadhigtay mid sifiican loogu adeegsan karo dad badan inay isticmaalaan kombuyuutarka.
Waa wax laga xishoodo in Mandriva uu naga tagay waxaanan xasuustaa in distoorkani uu ahaa kii ugu horreeyay ee akhlaaqda leh ee aan ku sameeyo Windows OS; _;
Xaaladdayda, waxay ahayd distoorkii ugu horreeyay ee aan u isticmaali karo beddel ahaan Windows XP disk-kayga oo xoqay wakhtigaas.
Julius Saldivar dijo
Ceeb weyn, waxay ka mid ahayd waxyaabihii waaweynaa ee 8 sano ka hor jiray. Waxay ahayd tii iigu horreysay ee aan ku rakibo kombuyuutarkeyga oo ay ila socoto dhowr sano, aniga ahaan xilligaas yaab. Midka kale ee aan adeegsaday bilowgii wuxuu ahaa Zenwalk oo waliba nus baa dhimatay.
Jawaab Julio Saldivar
Ogaanshaha maqalka xun, waxaan isticmaalaa debian 8.
Haddii aad ku rakibtay Firefox meesha loo yaqaan 'Launchpad PPA', sida iska cad waxay u muuqan doontaa Ubuntu.
Waxyaabaha ayaa ah in la beddelo wakiilka isticmaalaha.
Nabadgelyo Mandrake. Waad ku mahadsan tahay, waan ku riyaaqay faa'iidooyinka GNU / Linux. (Weli waxaan haystaa Mandrake 9 CD).
Maalmo ayuu xirnaa, oo waxaan u haystay warkan quraacda!
Si qariib ah ayaan wax uga qorayaa Mageia, markaa anigu waxaan ka mid ahay luminta waxaan filayaa. 🙁
Arimaha ilaa hada?
Waxaan sugi doonaa dhowr maalmood si aan u cusbooneysiiyo, gaar ahaan siinta meelaha aan u isticmaalo waqtiga.
Si fudud ilaahay ayaa u sii joogi doona xuska kuwii qaaday talaabooyinkii ugu horeeyey ee Linux iyo badanaa Kde
Aad ayuu u xun yahay, mandrake (ma xasuusto midkee) wuxuu ahaa distoorkii ugu horreeyay ee diraya darawalkayga adag, markaas inbadan oo iyaga kamid ah ayaa raacay, laakiin mandrake ayaa uguhoreeyay, aadna waan uga xumahay
Aad ayey u xun tahay, mandriva waxay ahayd tii ugu horreysay ee aan halkaas ku isticmaalo 2006-2007, aad ayaan u jeclaa, in kasta oo laga soo bilaabo 2009 diiradeyda ugu weyn ay tahay fedora, illaa 2010 waxaan raacay raadadka.
Mageia mar dambe isku mid ma ahayn, karti badan maxaa yeelay waxay lahayd heer kale oo ah Linux horeyba, oo waxaan la qabsaday fedora badan.
PS: PCLinuxOS kama weynaado mageia iyo openmandriva?
Xaalkayga, Mandrake ayaa i bilaabay, in ka badan 35 sano ka hor. disto saaxiibtinimo markii aanu jirin midkood.
Hadda waa la caayay.
Waxaan ku dhacay inaan u wareego Debian, diskiga diskiga.
Waxaan ku sii wadaa Debian. laakiin cayda Mandrake ayaa ugu hooseysa. Marka aadan dhalan, ama markaad bixisay kharashka 'distro' la'aan Internet. Waan sameeyaa. Maxaa ceeb ah.
Waxaan iibsadaa Linux disros, muddo 35 sano ah. Waxaan arkay iyaga oo koraya oo baaba'aya.
AH, PCLinuXOS, oo igu maaweeliya, waxay lamid tahay jilitaan qeexan, sida Manjaro.
Waxaan ku hayaa sanduuqiisa, iyo buug ku qoran Isbaanish, nooca asalka ah ee Jarmalka ee SUSE. Laga soo bilaabo markii Windows uusan aqoon sida loo sameeyo O leh kalagoys.
Waa hagaag, sidoo kale sanduuqiisa, nooca ugu horreeya ee OS / 2 Warp. Maxaa jira.
Hadda rakibidda OS waa gorgortan.
Iyo distros way sii socon doontaa. Waa shaqo aad u daal badan in la sameeyo walax wax ka yar shan boqol oo qof oo keliya in ay u isticmaalaan, si joogto ah, iyo sida OS xulashadooda ah. Waa wax aad u daal badan in, marka adduunka laga isticmaalo Windows-ka ay ka badan yihiin hal bilyan, iyo kuwa isticmaala Mac, aad uga yar, laakiin aad u tiro yar oo malaayiin ah. Ubuntu, ugu yaraan wuxuu leeyahay inta u dhexeysa 20 illaa XNUMX milyan. Laakiin, u shaqeynta si inyar oo keliya ay u isticmaalaan wixii aad soo uruurisay oo aad amartay, ma aha wax faa'iido leh, marka loo eego waqtiga / dadaalka.
Waxaan u maleynayaa in horumarinta disrosku ay noqon karto qashin xirfado iyo hibooyin. Dadka sida kuwa VLC ama Firefox, waxaa hagay falsafad ah Xorriyadda Horumarka, waxayna soo mareen guulo onkod leh, caan ah. Dunida badhkeed waxay isticmaashaa xalalkooda IT-ga, waxay leeyihiin sumcad aad u wanaagsan. Dad aad u karti badan oo ka shaqeeya hormarinta hargabka ayaa qaban kara adeeg ka fiican haddii ay hibadaas u hibeeyaan si ay u horumariyaan barnaamijyo runtii aad u fiican oo waxtar u leh dunida Linux, iyo xitaa iyaga oo ka dhigaya barxad-isweydaarsi.
Aniga ahaan, sida isticmaale Linux ah codsi sida OpenShot ah ayaa si aan xad lahayn uga qiimo badan qaybinta badan ee halkaas ka jirta ee lagu xusay. Xitaa waxaan rabaa inay ka dhigaan mid ku habboon Windows. Gelinta hibo badan si loo horumariyo barnaamij runtii loo baahan yahay ayaa aad uga fiicnaan kara sameynta distro (ama wax soo saar ah) marka, asal ahaan, iyo kala duwanaanshahooda, waxaa horey u jiray jahwareer badan oo dhammaantood asal ahaan wax isku mid ah ayey sameeyaan, ama waa loo qaabeyn karaa iyada.
Jawaab Vladimir Paulino
Waxaan hortayda ku haystaa CD-ga nooca rasmiga ah ee 7.2 kaas oo aan ku faani jiray adeegsigiisii ​​dhammaadkii 2000, waxaan u mahadcelin karaa oo keliya kooxda aadka u fiican ee horumariyayaasha ee ii suurta geliyey inaan ku soo dhowaado, ogaado oo aan si joogto ah ugu noolaado adduunka Linux, iskuday badan oo hore ka dib, sida RHel 5.1 xagaaga '98, tusaale ahaan.
Maanta taageeradayda maaliyadeed waa Linux, mar dambe kumuu jirin kumbuyuutar PC ah oo gurigayga lagu rakibay intii aan kari karayay iyo inaan waqti ka xado qoyskeyga, laakiin sida sysadmin ee jawi ka badan 700 oo server VmWare ah iyo illaa 20.000 kun oo adeegsadeyaal ah.
Waxaan ahay 53 sano jir waxaanan sii wadaa inaan ku raaxaysto dadaalka cajiibka ah ee ka qayb qaatayaasha la yaqaan iyo kuwa aan la magacaabin ee dunidan weyn ee Linux.
Kaliya waxaan dhihi karaa:
Mahadsanid Gaël, Mandrake / Mandriva!
Weligey maan jeclayn Fedora ilaa aan isku dayey Fedora 22, wali waxay leedahay faahfaahin qaar laakiin wixii aanan jeclayn ayaa lagaga adkaadey qaybtan ugu dambaysa, waxaan ka helay naqshadda caadiga ah iyo qaababka cusub sida DNF ee caagga u diraya yum. Dhinaca kale, xaqiiqda ah in Gnome 3.16 ay tahay wax la mahadiyo in kasta oo ay tahay inaan la qabsado kala duwanaanshaha qaarkood (sanadaha la isticmaalayo Ubuntu iyo Linux mint).
Hagaag waxaan uga tagayaa xiriiriye kuwa doonaya inay ogaadaan sida loo rakibo fedora, waxaan rajeynayaa inay waxtar yeelan doonto.
Sideen ku helay xaaskeyga inay u wareegto Ubuntu
Xitaa sababo badan oo loo beddelo Xafiiska Libre